Mmemme kamera asatọ kacha mma maka Windows, macOS na Linux 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
You nwere ike ịchọta ụfọdụ edemede nke mmemme kamera na ahịa. A na-eji ụfọdụ ngwa iji nwalee igwefoto PC ma hụ ma ọ na-eweta ihe ọ na-ekwe nkwa. Ndị ọzọ nwere mmasị na-atọ ọchị ma tinye nzacha na onyogho weghaara. Enwekwara nhọrọ ndị na-enye gị ohere idekọ ihe niile egosiri maka nyocha ọzọ.
N'okpuru ebe a bụ mmemme kamera asatọ kacha mma maka Windows, macOS, na Linux. Lelee!
Ọtụtụ mmadụ na-enye ọtụtụ ọrụ bara uru maka nzukọ ọgbakọ vidiyo ma ọ bụ ndekọ vidiyo vidiyo. Ngwa ahụ na-enye gị ohere ide na see na ihuenyo, tinye ihe oyiyi na vidiyo, gụnyere ụdị, na ndị ọzọ. Enwekwara ike ichikota onyonyo kamera na faịlụ, gosiputa onyonyo komputa ma obu igwefoto ekwentị.
Onye ọrụ ahụ ka nwere ike ime mgbanwe agba, mbugharị, gbanwee opacity, yana iji ihe nzacha na mmetụta na-atọ ụtọ. Enwekwara nhọrọ ịghasa na ntanetị dị iche iche dịka YouTube, Twitch na Facebook. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, chekwaa ọdịnaya ruo 720p na mbipute n'efu na 4K na ụdị akwụ ụgwọ.
Enwere ike ịchekwa vidiyo na ụdị ewu dị ka MP4, MKV, MOV, na Flv.
ỌtụtụCam (n'efu, na nhọrọ maka atụmatụ akwụ ụgwọ nwere atụmatụ ndị ọzọ na enweghị akara mmiri): Windows 10, 8 na 7 | macOS 10.11 ma ọ bụ karịa
YouCam bụ mmemme na-enye ngwaọrụ maka ọrụ na egwu. Kwekọrọ n'Ozizi dị iche iche video ọkpụkpọ ọrụ na ndụ video nyiwe, o nwere ezigbo oge mma nzacha. Ghara ikwu banyere narị otu narị nke eziokwu abawanyela.
Banyere ihe ngosi, onye ọrụ nwere akụrụngwa iji detuo ihe, bulie vidiyo na onyonyo, kesaa ihuenyo, na ndị ọzọ. Ya enyi na enyi interface-enye gị ohere iji chọta isi atụmatụ na ala.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịdekọ, enwere ike ịchekwa vidiyo ahụ na mkpebi dị iche iche, gụnyere Full HD, na AVI, WMV, na MP4.
YouCam (akwụ ụgwọ, ikpe ikpe n'efu 30): Windows 10, 8 na 7
3. Nnwale kamera
Nnwale Webcam bụ ngwa ntanetị nke na-enye gị ohere ịnwale ọrụ nke igwefoto PC gị na-enye n'ụzọ dị mfe. Nanị tinye weebụsaịtị ma nweta bọtịnụ ahụ Pịa ebe a iji nye ohere ịnweta ihe nchọta kamera. Mgbe ahụ gaa Gbalịa igwefoto m. Nnwale ahụ nwere ike iwe nkeji ole na ole.
Enwere ike ịmata data dịka mkpebi, ọnụọgụ bit, ọnụ ọgụgụ agba, nchapụta, nchapụta, na ndị ọzọ. Na mgbakwunye na nyocha izugbe, onye ọrụ nwere ike nyochaa akụkụ ndị ọzọ akọwapụtara dị ka mkpebi, ọnụego etiti na igwe okwu. Enwekwara nhọrọ ịdekọ vidiyo na weebụsaịtị n'onwe ya ma chekwaa ya dị ka WebM ma ọ bụ MKV.
Nnwale kamera (n'efu): Weebụ
4. Igwefoto Windows
Windows n'onwe ya na-enye usoro ihe omume webcam. Igwefoto Windows bụ ihe dị mfe ma na-arụ ọrụ ọzọ, karịsịa maka ndị chọrọ naanị ọrụ ndị bụ isi. Site na ịgbalite ọnọdụ Ọkachamara na ntọala ahụ, ịnwere ike ịhazie nguzo ọcha na nchapụta.
Iji nọrọ na mgbe niile na etiti ahụ, ngwa ahụ nwere ụfọdụ ụdị ntanetị. Enwekwara nhọrọ igbanwe ogo vidiyo n'etiti 360p na Full HD na ugboro ole, mana oge niile na 30 FPS. A na-echekwa nsonaazụ na JPEG na MP4.
Igwefoto Windows (n'efu): Windows 10
5. Webcam egwuregwu ụmụaka
Webcam Toy bụ ngwa dị n'ịntanetị dị mfe maka onye ọ bụla na-achọ ihe nzacha na-atọ ụtọ iji were kamera wee see foto. Naanị gaa na weebụsaịtị wee pịa Njikere? Mụmụọ ọnụ ọchị!. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ gbochiri ịnweta, nye ikike iji igwefoto PC.
Wee pịa bọtịnụ ahụ Nkịtị Ibuba niile dị. Enwere ọtụtụ nhọrọ, gụnyere kaleidoscope, ụdị ghostly, anwụrụ ọkụ, ihe nkiri ochie, katuunu, na ọtụtụ ndị ọzọ. Họrọ ihe masịrị gị wee gaa akara ngosi igwefoto ka ịdebanye aha.
Enwere ike ịchekwa nsonaazụ ahụ na PC ma ọ bụ jiri ya kesaa na Twitter, Foto Google ma ọ bụ Tumblr.
Ihe egwuregwu ụmụaka (n'efu): Weebụ
Ihe kariri nani webcam mmemme, OBS Studio mara maka ndakọrịta ya na ọrụ niile gụgharia vidiyo. N'ime ha, Twitch, Facebook Gaming na YouTube.
Mana n'ezie ọ na - enye gị ohere ịdekọ onyonyo igwefoto gị ma chekwaa ọdịnaya na MKV, MP4, TS na Flv. Mkpebi ahụ nwere ike ịdị site na 240p ruo 1080p.
Ngwa ahụ nwekwara ọtụtụ ngwaọrụ edezi nwere ike ime ka ihe gị dị ka ọkachamara. N'ime ha bụ atụmatụ maka mgbazi agba, ndabere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ịgwakọta ọwa ọdịyo, mbelata mkpọtụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
OBS ọmụmụ (n'efu): Windows 10 na 8 | macOS 10.13 ma ọ bụ karịa | Linux
GoPlay nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị mbido, mana ha chọrọ ịhapụ isi. Ihe omume a na-enye ọrụ maka ide ihe na ihuenyo ahụ, yana maka itinye foto. Enwere ike idekọ vidiyo na 4K na 60fps ma dezie ya na nchịkọta akụkọ.
Ngwa ahụ na - enye gị ohere ịdekọ ihuenyo PC gị ma mee vidiyo vidiyo. The free version nke ngwa-enye gị ohere ka ịdekọ vidiyo nke naanị 2 nkeji, na watermark. Enwere ike ịchekwa nsonaazụ na MOV, AVI, MP4, FLV, GIF ma ọ bụ na ọdịyo.
Gaa gwuo egwu (n'efu, na ụdị akwụ ụgwọ zuru ezu): Windows 10, 8 na 7
8. Apowersoft Free Online ihuenyo edekọ
Apowersoft Free Online Screen edekọ adabara ndị kwesịrị ka ịdekọ PC na ihuenyo mgbe na-ekiri webcam oyiyi. Ebe nrụọrụ ahụ na-enye ihe onwunwe maka ederede ederede na ihuenyo na gụnyere ọdịdị. Ihe niile dị n'ịntanetị, mana tupu ịmalite, ịkwesịrị ibudata a roket onye na-ebu egbe nwetụ PC.
Enwere ike ịchekwa nsonaazụ gị na kọmputa gị dị ka vidiyo ma ọ bụ GIF, echekwara ya na igwe ojii, ma ọ bụ kesaa ya na YouTube na Vimeo. Enwere ike idozi mkpebi ahụ dị ka obere, ọkara ma ọ bụ dị elu.
Apowersoft Free Online ihuenyo edekọ (n'efu): Weebụ
Jiri ekwentị gị dị ka kamera PC PC site na Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB
Ngwa ịdekọ ihuenyo PC gị n'efu
Bara uru nledo ngwa